Uvavanyo lweprojektha ye-Excelvan BL | I-Androidsis
Namhlanje lixesha lokuba ndikuxelele ngesixhobo esinefashoni kakhulu kwiiveki ezidlulileyo, projektha, i I-Excelvan BL. Ukuza kuthi ga ngoku besingakhange siqwalasele kwakhona nayiphi na imodeli yeprojektha, kwaye siyakholelwa ukuba ixesha lifikile. Ngokukodwa xa imveliso esiyivavanyileyo injalo iluncedo kwaye ibhetyebhetye.
Kwakubonakala ngathi olu hlobo lwezixhobo zokumamela kwaye lwehlile embalini, kodwa akukho nto inokuthi iqhubeke nenyaniso. Ngokunikwa iindaba kwihlabathi elinomxholo wemultimedia, bakhethe iqhinga elilungileyo: "kuvuselelwa okanye kusweleke". Kwaye namhlanje sinokukuxelela ukuba ukulungiswa kwenziwe ngendlela enkulu.
1 Iprojektha ibuyele kwifashoni
3 Iziqulatho zebhokisi kunye nezixhobo
4 Uyilo kunye nezinto ezithile zeprojektha ye-Excelvan BL
4.1 Unxibelelwano lwayo yonke into
5 Iprojektha engaphezulu
6 Iinkonzo kunye neengozi zeProjektha ye-Excelvan BL
Iprojektha ibuyele kwifashoni
Sikwazile ukubona ukuba kwenzeka njani izikriniNokuba ziifowuni eziphathwayo, zekhompyuter, okanye oomabonakude ekhaya abayeki ukukhula. Ziyanda ngokuya zikhula kwaye zinesisombululo esiphezulu kunye nomgangatho. Kwaye le yinto abavelisi beprojektha abayisebenzisileyo ngokuhlaziya isixhobo esabonakala siphelelwe lixesha.
Umkhwa wezikrini ezinkulu kunye ezinkulu wenze imfuno ebiza kakhulu njengomthetho. Izikrini zikhula ngokobungakanani, kumgangatho wenkcazo nakwiimpawu ezinje ngonxibelelwano lwe-intanethi. Kodwa fikelela kwiimodeli ezinkulu kwaye sixhotyiswe ngcono ayifumaneki kuwo wonke umntu.
U-Excelvan BL usicebisa isisombululo esihle kakhulu Kweli bango, kwaye eyona ilungileyo, iyenza ngexabiso elifikeleleka ngakumbi. Tamaño umfanekiso ukusindisa, umgangatho, inkcazo kunye nokunxibelelana "okungenasiphelo". Enkosi kumqolo ogcweleyo wonxibelelwano, ukongeza kwezi zingenazingcingo, sinokonwabela imixholo yazo zonke izixhobo zethu.
I-Conecta tu efowuniwena khomputhawena ikhonsoli yevidiyo, ikhamera yevidiyo, nantoni na oyifunayo. Kwaye uyonwabele kubo bonke ubungakanani kwaye kuwo wonke umgangatho. Ngaba ucinga ukuba awunakuba nescreen esikhudlwana ekhaya? Ubungalunganga. Con Iproyector I-Excelvan BL ungonwabela ubungakanani be ukuya kwii-intshi ezingama-200. Ukupasa okwenyani kwigumbi lokuhlala ngexabiso elingenakubekwa.
Inkqubo yokusebenza Android 6.0.1
Te knoloji I-TFT + LCD + itekhnoloji ye-LED
Isigqibo 1280 x 768 ngenkxaso ye1080P
Akhanye I-3200 Lumens
Umgama wokuqikelela ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yeemitha
Ubungakanani boqikelelo ukusuka kuma-intshi angama-32 ukuya kuma-200
Lens 126 mm
Unxibelelwano I-USB - uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi - VGA - Audio kunye nevidiyo
GPU Mali 450 isiseko seepenta
Imemori ye-RAM 1 GB
Ukugcina 8 GB
Ixabiso 164.37 €
Ikhonkco lokuthenga I-Excelvan BL
Iziqulatho zebhokisi kunye nezixhobo
Ngesi sihlandlo, i caja apho esi sixhobo siza kutsala umdla wayo ubukhulu obukhulu. Kwaye ukubona ubungakanani beprojektha, kuyinto eqhelekileyo ukuba ibe nemilinganiselo efanayo. Ngaphakathi, ukongeza kwi-Excelvan BL esiyifumanayo izinto ezahlukeneyo. Ngokubanzi, konke kwahluke kakhulu kwinto esihlala siyifumana kwibhokisi ye-smartphone xa singenayo ibhokisi.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukudityaniswa ulawulo kude. Kwaye igqityiwe kuba isinika ithuba lokulawula yonke into ngaphandle kwesidingo sokunxibelelana ngokwasemzimbeni nesixhobo. Into esinokubulela ngayo xa sithetha ngeprojektha kuba zii-gagjets ezingasoloko zifumaneka kwiindawo ezifikeleleka lula. Ukufikelela kwimenyu, kwi tshintsha ijelo, ngenxa ivolumu yolawulo okanye ukuzala kwakhona. Yonke into isentendeni yesandla sethu, inene kakhulu Ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Ukongeza, sinayo ngaphakathi kwebhokisi ibhokisi ye- ikhodi yamandla kunye nezinye iintambo eziza kusebenza qhagamshela izixhobo zeaudiyo / zevidiyo. la Amaxwebhu ewaranti kunye nencwadana yomsebenzisi. Kwaye okokugqibela, ngaphandle kwezikhonkwane ezikhululekileyo, umlenze ubekwe ngaphambili onokuhlengahlengiswa kubude.
Uyilo kunye nezinto ezithile zeprojektha ye-Excelvan BL
Ngokungafaniyo noko besinokukulindela, iprojektha I-Excelvan BL ayisisixhobo esincinci. Kukude kwezo zindululo zeprojektha zepokotho ukuba enye ifemi yeza kwintengiso kwiminyaka emininzi eyadlulayo ngaphandle kwempumelelo enkulu. Kule meko imeko ayihambelani ncam kunye nolungiselelo lwezothutho. Fikelela kwezinye imilinganiselo 32 x 24 x 12 iisentimitha.
Inokuba yinto engalunganga, kodwa ukuba siyibona njengemveliso yekhaya, ayisiyonto esinokuyicekisa. Ayizukufika kuthi kuthi ukuba siphathe umabonwakude sihlandlo ngasinye siphuma endlwini. Kwaye xa sele ibekwe kakuhle ekhaya, njengeTV, andicingi ukuba kufuneka siyisuse kakhulu, nangona besinokuyenza.
Kulo Inxalenye engaphambili Iprojektha ye-Excelvan BL ikwicala lasekunene, i injongo, eza nefayile ye- ikepusi yerabha yokukhusela. Ecaleni kwakhe sinomnye waba babini abafumana i-infrared Le projektha inayo. Ngale ndlela sinokusebenzisa ulawulo olukude ukuba sisemva okanye siphambi kweprojektha.
Kwi phezulu i amaqhosha okulawula ukuze ukwazi ukufikelela kwimenyu kunye nokukhetha ukudlala kwisixhobo ngokwaso. Sishiye ekunene amaqhosha e khetha el i sixhobo yangaphandle kunye imenyu. Kwiqhosha eliphambili kufuneka chaneli phezulu nasezantsi, ulawulo lwevolumu kunye neqhosha "Ngena". Kwaye okokugqibela iqhosha lamandla, ecaleni kwenye apho kukho elinye izibuko lefom.
Ukongeza kumaqhosha esinawo iivili ezimbini iyakusisebenzela ukugxila umfanekiso ngokuchanekileyo. Nangona le nkqubo ibonakala iyinto ethile yakudala, sesona sisombululo sikhawulezayo nesikhawulezayo sokufumana inkcazo eyaneleyo. Kuya kufuneka siyilungelelanise ngokuxhomekeke kumgama ukusuka eludongeni apho sifuna ukwenza umfanekiso. Inkqubo yomhla kodwa esebenzayo.
Unxibelelwano lwayo yonke into
Ukuba sithanda into kwisixhobo, yindlela enokuba bhetyebhetye ngayo. Kungenxa yoko le nto sayithanda kakhulu iprojektha ye-Excelvan BL. Jonga nje ngokukhawuleza kwifayile ye- ngasemva yesixhobo ukubona ukuba abavelisi abasindisanga kwicandelo lefayile ye- uqhagamshelo. Ungayidibanisa nayo yonke into! No escatimes tu con el mejor precio.
Sifumene: 2 amazibuko i-USB, 2 amanye amazibuko e HDMI, izibuko le VGA, Zonke iintlobo zonxibelelwano kwizixhobo zangaphandle ze odiyo, kunye nezibuko lokudibanisa I-eriyali kamabonwakude. Kodwa ngokungathi ayonelanga, i-Excelvan BL nayo inayo uqhagamshelo lweBluetooth kunye kunye Unxibelelwano lweWiFi. Zimbalwa izixhobo esizivavanyileyo ezisinika amathuba amaninzi, kwaye siyayithanda loo nto.
Njengoko besitshilo, siyithandile i-Excelvan BL kakhulu ngezizathu ezininzi ezahlukeneyo. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo kukho into ebalulekileyo eyahlula abanye wabakhuseli abaqhelekileyo. I-Excelvan BL yiprojektha leyo ineenkqubo zayo zokusebenza ezisekwe kwi-Android. Ke sinokuyisebenzisa ngaphandle kokuqhagamshela kuso nasiphi na isixhobo. Ngaba ulahlekelwe ngamathuba?
Ufuna nje i-intanethi kunye nodonga olugudileyo. Ngale projektha kunye nezi zinto zimbini, ungaqala ukonwabela iividiyo zakho ozithandayo zeYouTube. Ngenkqubo ye-Android apho Ungalanda usetyenziso ngokungathi kukho nayiphi na i-smartphone. Khuphela iNetflix, ngena kwiakhawunti yakho kunye neprojekthi isahluko samva sothotho lwakho oluthandayo naphina apho ufuna khona.
Kukwabaluleke kakhulu ukwazi ukuba i-Excelvan BL iza ixhotyiswe ngezibini zesithethi. Ke akuyi kufuneka ukuba ujonge izixhobo zangaphandle zomsindo nokuba. Fumana imuvi, uthenge ipopcorn kwaye wonwabele imiboniso bhanyabhanya ngosayizi opheleleyo ngaphandle kokushiya igumbi lokuhlala.
Iinkonzo kunye neengozi zeProjektha ye-Excelvan BL
Ukuze ube nakho ukubala kwi ubungakanani ukuya kwii-intshi ezingama-200 Ukubukela imovie ekhaya akuqhelekanga kufumaneke kuye wonke umntu, nge-Excelvan BL kunokwenzeka okuncinci kakhulu.
La uqhagamshelo ukuba ibonelela ngokungaqhelekanga, uya kuba nakho ukudibanisa yonke into ngaphandle kokukhetha.
Elinye inqaku elithanda ukuba iprojektha inayo izithethi ezihlangeneyo. Ezinye iimodeli zifuna izithethi ezongezelelweyo, okanye isandi sidlalwa kwisixhobo esixhumeneyo.
Iprojektha inayo Inkqubo yokusebenza esekwe kwi-Android kwaye inokusetyenziswa ngokuzimeleyo ngonxibelelwano lwe-intanethi yinto entsha kwaye siyayithanda.
Ubungakanani besikrini ukuya kwii-intshi ezingama-200
Izithethi zakhiwe kwisixhobo
Inkqubo yakho yokusebenza
El ubungakanani obugqithisileyo I-Excelvan BL iyenza ukuba ingabi sisixhobo "esiphathwayo" kakhulu.
Ago ingxolo y unika ubushushu, ngenxa yeqondo lobushushu bokukhanya, kodwa yinto ukuza kuthi ga ngoku eqhelekileyo kwiiprojektha zolu bungakanani.
Ubungakanani obenza ukuba ingaphatheki kakuhle
Ingxolo evela kubalandeli bakho kunye nobushushu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uvavanyo lweprojektha ye-Excelvan BL
Izicelo ezi-5 zasimahla ekufuneka uzifakile kwifowuni yakho ye-Android